Mogadishu Journal » Ciidamada dowladda iyo Al-shabaab oo ku dagaalamay gobolka Baay
Ciidamada dowladda iyo Al-shabaab oo ku dagaalamay gobolka Baay
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya inta u dhexeeysa Degmooyinka bardaale iyo baydhabo ayaa sheegaya in Dagaal xoogan uu halkaasi ku dhexmaray ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa Dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kusii jeeday Magaalada Baydhabo ayaa la sheegayaa in wadada loo galay islamarkaana uu siodaasi dagaalka ku bilowday.
Dagaalka ayaa waxaa uu socday saacado badan,iyadoona labada dhinac uu khasaaro ka soo gaaray dagaalkaasi,inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha dagalkaasi.
Dadka Deegaanka ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in khasaaro uu soo gaaray ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa Dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa xiligan go’doomiyay degaano badan oo ku yaalla maamulka Koonfur Galbeed, waxaana taasi ay caqabad ku noqotay dadka Shacabka ah.
Kheyre oo guddoomiyay shir looga hadlayay Amniga dalka
Dowladda oo beenisay in weerar lala damacsan yahay Garoonka Aadan Cadde